WAAYIHII WARSAME Q20AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q20AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q20AAD
Warsame markii uu maqlay erayada Muna afkeeda ka soo baxay hadalkii ayaa ku dhegay jawaab uu celiyo ayuu waayay. Cabbaar ayaa labadoodiba afkii juuqda gabay qof walbana hoos u hundhuray sidii dad geeri gashay. Muna inta ay istaagtay ayaa ay dhaqaaqday ayada oo aan Warsame juuqna u oran asaguna inta uu buugaagtiisa baandhaystay ayuu dhankii fasalku ka xigay u dhaqaaqay.
Warsame maalintaas oo dhan waxa uu maqlayay codka Muna oo leh “Warsame waan ku jeclahay”. Casharradii maalintaas uu qaatay si fiican ugu ma dhibcin maankiisa oo maalintaas oo dhan waxaa maankiisu u afduubnaa codkii afka Muna ka soo baxay ee “Warsame waan ku jeclahay”. Mar waxa uu iswaydiiyay sida ay Muna u jeclaatay iyo waxa ay run ahaan u la jeeddo waan ku jeclahay, marna waxa uu la yaabay indha’adaygga Muna ee ah in ay nin ku tiraahdo “waan ku jeclahay”. Waa sax in Warsame la yaabo Muna waayo dhaqanka Soomaaaliga inta badan ma dhacdo in gabadhu nin ku tiraahdo waan ku jeclahay ama jacaylkeeda u sheegato gabadhii sidaas fashana waxaa lagu sheegaa waxyaabo aan wanaagsanayn.
Habeenkii ayay Muna taleefanka guriga ka soo wacday Warsame. Waxa ay rajaynaysay in ay jawaab ka heli doonto dhambaalkii jacayl ee ay saaka barxadda iskoolka ku guddoonsiiyay Warsame. Balse Warsame sheekooyin kale iyo maaweelis uu uga dan lahaa in uu Muna ku mashquuliyo ayuu u galay. Warsame waa ay u caddahay go’aanka iyo jawaabta uu Muna siinayo laakiin sidii uu ugu sheegi lahaa ayuusan garanayn. Warsame jacayl iyo jilistiis u ma uu soo jeedo dhawaanahaanna kuma talo jiro. Yeelkeedi xattaa haddii uu rabi lahaa awooddeeda ma leh. Warsame wali waa sindheer agoon iyo rajayna ah. Waxaa u sii dheer in uu goor hore go’aansaday in uu waxbarashada heersare ka gaaro.
Warsame waxa uu ka fakarayaa qaabkii uu Muna ku oran lahaa “raalli ahow.” Inta uu Warsame taas ka fakarayo Muna sariirta ayay beer-beer u jiiftaa. Waxa ay qaadaysaa “Dheeraa waqtiguyeey iyo “Muuqiisaan arkaa misana ma hayo, midna kama helo maya iyo haa.”
Warsame iyo Cabdiwaaxid kaliya ma ahan arday iyo macallinkiis iyo masuul iyo shaqaalihiisa ee waxa noqdeen saaxiibbo kaftanka iyo sheekooyinka isdhaafsada. Iskuna siro warrama. Sidaas darteed ayaa uu Warsame goostay in uu arrinta Muna kala tashado saaxiibkiis Cabdiwaaxid.
Warsame sidii caadada ahayd waxa uu fadhiyaa xafiiska, kombiyuutarka ayuu ku foogan yahay. Gaboobe oo fasalka ka soo baxay oo raba uu rawoxo ayaa la jooga. Warsame iyo Gaboobe waa jaallayaal ay sheekadu isugu baxdo ninba ninka kalena sirtiisa u sheego. Gaboobe waa uu la socdaa sheekada Warsame iyo Muna in badanna Warsame waxa uu kuka taliyay in uusan Muna iska sii dayn. Balse Warsame taasi kuma socoto.
Cabdiwaaxid oo ka soo baxay fasal uu macallin ka yahay waa kan sidii caadada u ahayd koobkiisii yaraa dhagta haysta ee mishiinka yar ee xafiiska dhexyaal inta uu batoonka gaduudan riixay koobkii hoos dhigay kadibna jaar halkaan yaal inta uu qaaddo galiyay dhawr jeer bun ka soo qaaday kuna walaaqay koobkii biyaha kulul ku jireen ee uu gacanta ku haystay kadibna fariistay kursi dhinacyaal Warsame kuna tiraabay “Warsamow haddee adigu kafeega ma aftaqaanid?” Warsame: raggu shaaha ayay cabbaan dumarkuna qaxwada ee Cabdiwaaxidow sow adigaan caynwareejiyay. Cabdiwaaxid oo aad ugu qoslay hadalka Warsame ayaa yiri “dumarka Bila ma kafeega ayay cabbaan?” Warsame: kafee sow qaxwo la soo farsameeyay maahan? Haa dumarka Bila qaxwada ayay cabbaan ragguna shaaha. Cabdiwaaxid: maya saaxiib Soomaaliya dumarku kafeega maba cabbaan ee ragga un baa cabba. Qaxwo Soomaaligu waa ka duwan tahay kafeega.
Gaboobe asagu sheekada kuma jiro waa uu se la socdaa oo hadba nin ayuu qosol ugu jiibinayaa, computer halkaas ah ayuu dulfadhiyaa.
Warsame: war kala ma garanayee, saaxiibow arrin baa rabaa in aad iga talo siisid ee kansho ma haysaa mise fadalkaad ku noqonaysaa?
Cabdiwaaxid: maya fasal ku noqon maayo laakiin suuqaan rabaa in aado oo rag kula ballansanahaye maxaa jira? Ma Muna ayaad guursan rabtaa? Cabdiwaaxid horay ayuu u la socday nuxnuxda Muna iyo Warsame inkasta oo uusan waligiis Warsame waydiin waxa Muna iyo asaga ka dhexeeya haddana horay baa loo yiri kor waayeel waa wada indho.
Warsame: gacale Cabdiwaaxidow murti baa ahayd “waxa soo socda nin garan waayay waxa jooga ma garto”, waan ku ogaa indheergaradnimada. Gacale Cabdiwaaxid waad ogtahay xaalka iyo hayaanka noloshaydu halka ay geeddiga u tahay. Adiga oo intaas miyaad guur igu qalqaalinaysaa? Ma horay ayaad ii riixaysaa mise gadaal? “waad ogyahay anigu halka aan kula rabo in aad higsatid balse kaliya waxaan arkayay ayaantaan in aad adiga iyo Muna sheeko wada shabinayseen.”
“Anigaa la igu shabinayay sheeko aan igu socon”
“Ma adigaa lagu shukaansaday?”
“Shukaansi kaliya ma ahan ee waxaa la rabaa in la i arooso”
Cabdiwaaxid oo qosol dartiis illin ka timid ayaa yiri “Waryaa qofta way kulushahay, wallaahi saaid baa loo hayaa”
Warsame: Muna waa gabar wanaagsan oo aad u qiimo badan haddaan tabarteed iyo da’deed jooga waan guursan lahaa. Gaboobe ayaa yiri “war haddaba waad guursan kartaaye cabsida iska dhaaf.
Cabdiwaaxid: ma guur baa kaa dalbatay?
Warsame: waan ku jeclahay ayay igu tiri
Cabdiwaaxid: saa maxaad ugu jawaabtay?
Warsame: jawaab ma siin, ilaa hadda waa ay iga sugaysaa.
Cabdiwaaxid: gacale Warsamow isaga carar naagtaas yaysan baxar ku galine.
Warsame: maxaad u la jeeddaa?
Cabdiwaaxid: naag nin waan ku jeclahay iyo i guurso ku leh dan kale ayay leedahay. Gabar waa tii ayada jacaylka iyo doonista loo bandhigi jiray. Laakiin gabar nin ku leh waan ku jeclahay iyo i guurso waa diin iyo dhaqan bi’is ee ka dheerow. Hadday doonto uur bay leedahay ay rabto in ay dusha kaa saarto hadhow.
Warsame: gacale Cabdiwaaxidow gabadhaas walaashay ah xumaan kuma arag kuma dambaabi karo wax walba oo ay ahaan lahaydba aniga ayaan diyaar ahayn ee kaliya waxaan garan la’ahay sidii aan ugu sheegi lahaa go’aankayga. Waa gabar walaashay ah oo aan jeclahay ma rabo in aan niyadda ka jabiyo oo toos ugu sheego jawaabta ay iga sugayso.
Cabdiwaaxid: taasi dhib ma leh, waraaq u qor kadib na farta ka saar ama qof ugu dhiib.
Warsame: waa talo wacan. Mahadsanid.
Cabdiwaaxid: mudnid adiguna Warsame.
Gaboobe: macallin Cabdiwaaxidow taladaas maad ku noqotid.
Cabdiwaaxid: waryaa wiilka yar ha waalin.
W/Q; Cali Maxamad Diini
La soco qabaha dambe